मदिरामुक्त अभियानमा महिला : महिला हिंसाको प्रमुख कारण मदिरा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / मदिरामुक्त अभियानमा महिला : महिला हिंसाको प्रमुख कारण मदिरा
मदिरामुक्त अभियानमा महिला : महिला हिंसाको प्रमुख कारण मदिरा
Posted by: युगबोध in प्रमुख समाचार, स्लाइड May 11, 2019	0 66 Views
घोराही । बिहे गरेको केही वर्ष मात्रै शान्ति पाए“, जब छोराछोरी जन्मिए श्रीमान रक्सीको लतमा फसेको थाहा पाए“। अहिले पनि यही हालत हो। घरमा बस्नुमान छैन। छोरा विदेशमा छ, बुहारी नातिनातिना च्यापेर सधै अरुका घर, बाख्राको खोरमा लुक्दै ज्यान जोगाउनु परिरहेको छ। सुख मनले रात काट्न पाएको थोरै रातहरु होलान् बा“की सधै उस्तै हो भन्दै घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ की ४५ वर्षीया धना सार्कीले गु्नासो पोख्नुुभयो। उहा“ले भन्नुुभयो– ‘श्रीमान्ले सधै रक्सी खाने हामीले कुटाइ खाने हो।’
कुलतमा फसेका श्रीमानका कारण उहा“ले शारीरिक पीडा मात्रै होइन मानसिक पीडा पनि दिनहु खेप्नुु परिरहेको बताउनुुभयो। घरमा बुहारी, साना नाति, कहिले काहीं पाहुुना र छोरी ज्वाइ“ आउ“छन्। श्रीमानको त्यो चालले मन खिन्न बनाउने गरेको दुखेसो पोख्नुुभयो। उहा“ले थप्नुुभयो– ‘कतै केही कामकाज गरे पनि कमाएको पैसा उतै रक्सीले रित्याउ“छ। खर्च चलाउन पनि छोराको भर पर्नुुपर्ने बाध्यता छ।’
उहा“ मात्रै होइन घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ तल्लो र माथिल्लो भकारे, बाराहाङेका महिलाहरुले मदिराको सास्ती निकै झेल्नुपरिको गुुनासो पोखेका छन्। स–साना छोरा नातिदेखि बृद्ध बाबु बाजे, श्रीमानहरुले मदिरा सेवन गर्ने गर्दा गाउ“ नै अशान्त रहेको स्थानीय रिखा शर्माले बताउनुुभयो। उहा“ले भन्नुुभयो– ‘प्रत्येक दिन कतै न कतै महिला रोइकराइ गरेको आवाज कानमा पर्छ। जसको मुख्य कारण नै मदिरा हो। घरेलु मदिरा प्रतिबन्ध गराउन सके प्रत्येक घरका महिलाहरु सुखको सास फेरी शान्त मनले घरमा सुुस्ताउन पाउने थिए।’
त्यस्तैमा अर्की स्थानीय महिला रिखा घर्तीले थप्नुुभयो– ‘मदिराले महिला पीडित बन्दै गइरहेकाले यसको अन्त्यका लागि महिलाहरु जागरुक भई मदिरा फाल्न शुरु गरेका छौं।’ जसमा पीडित महिलाहरुको साथ निकै रहेको उहा“को भनाइ छ। जसले मदिरा बनाउन र बेच्न अब केही सोच्नुुपर्ने बेला बनाउन सक्ने उहॉ“को भनाइ छ।
यसरी पत्ता लाग्यो मदिरा बन्ने र बेच्ने घर
बिहीवार दिउ“सो बाराहाङेका १० वर्षीय कृष्ण परियार मदिरा सेवन गरी गाउ“मा होहल्ला गर्दै हिडे। जसलाई गाउ“लेले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीमा बुुझाए। प्रहरीले ती बालकमाथि अनुुसन्धान ग¥यो। कहा“–कहा“ घरेलु मदिरा बन्ने र बेच्ने गरिन्छ भनी प्रहरी, स्थानीय महिला र वडा कार्यालयले पत्ता लगायो। शुुक्रवार उनै बालकसहित वडा कार्यालय , स्थानीय प्रहरी र महिलाहरुको टोलीले मदिरा फाल्न शुरु ग¥यो।
जहा मदिरापीडित महिलाहरुका पीडा पनि पोखिए। सबै आमा, बुहारी र छोरीहरु त्यो अभियानमा लागेको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीलबताउनुुभयो। बालकदेखि बृद्धसम्मले मदिरा सेवन गर्दा गाउ“नै मदिरा गन्हाउने भइसकेकाले यो प्रयास थालनी गरिएको उहा“को भनाइ छ। जसमा महिला मात्रै होइन सचेत अन्यले पनि साथ दिइएको उहा“को भनाइ छ। शुुक्रवार मात्रै रक्सी पार्ने सातवटा भाडा र ७७ वटा रक्सी र जा“डका ड्राम फेला परेका थिए।
मदिरामुक्त वडा बनाउने अभियान घरेलु मदिरा बेच्ने र बनाउनेहरुलाई केही आर्थिक आय पनि यसले समाजमा ठूलै असर पारिरहेकाले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ कोे कार्यालयले वडाका ४२ वटा टोल विकास संस्थाहरुमा मदिरामुक्त अभियान अन्तर्गत मदिरा फाल्ने र सचेतना कार्यक्रम फैलाउने वडाध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीले बताउनुुभयो।
दिनैपिच्छे हिंसाका उजुरी
प्रहरी चौकी गोग्लीमा दिनैपिच्छे घरेलु हिंसाका उजुरी आउने गरेको प्रहरी चौकी गोग्लीका प्रमुख धनवीर खड्काले बताउनुुभयो। दैनिक दुुई तीन वटा महिला हिंसाका उजुरीहरु कार्यालयमा आउने गरेको उहा“को भनाइ छ। मादक पदार्थ सेवन गरी श्रीमानले श्रीमती कुटपिट गरेका मात्रै घटनाहरु वडा नं. ४ बाट आउने गरिरहेको उहा“ले बताउनुुभयो। जसको मुख्य कारण मदिरा रहेको उहा“को भनाइ छ। मदिराका कारण घरेलु हिंसाका उजुरी दिनैपिच्छे आउने गरिरहेकाले मदिराले महिला धेरै पीडित रहेको उहाको भनाइ छ।
हिंसा र गरिवीले जन्माएको मदिरा
मदिराले हिंसा जन्माउने नभई हिंसाले मदिरा जन्माएको पाइन्छ। घरेलु हिंसा र गरिवीले मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण जन्माएको केही महिलाहरुको भनाइ छ। घरेलु हिंसामा परेका र गरिवीको रेखामुनि रहेका महिलाहरुले जीविकोपार्जनका लागि मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने गरेको स्थानीय महिलाहरुको भनाइ छ।
एकल महिला, विपन्न परिवारले मदिरा उत्पादनलाई दैनिक रोजीरोटीस“ग जोडेको स्थानीय पवित्रा रानाले बताउनुुभयो। जसको वैकल्पिक पेशा व्यवसायको खोजी सबैले गर्नुुपर्ने उहा“को भनाइ थियो। जसले सभ्य र शान्त, स्वरोजगारमुुखी समाज निर्माण गर्न सक्ने उहाले बताउनुुभयो। घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणस“ग जोडिएका परिवार र महिलाहरुलाई अन्य कुनै पेशा व्यवसायमा समेट्न सके यो समस्याको अन्त्य हुने उहाको भनाइ छ।
Previous: न्याय मरे लोकतन्त्र बाँच्दैन : मुख्यन्यायाधीश
Next: राप्तीमा तटबन्धको काम सुस्त, बजेट निकासा नभएपछि काम प्रभावित